Etu ị ga -esi mara ogologo oge kọmputa m dị | Nzukọ mkpanaka
Etu ị ga -esi mara ogologo oge kọmputa m dị
Cristian Garcia | | Sistemụ arụmọrụ, Windows
E nwere oge mgbe anyị nwere mmasị ịmata na nghọta Ogologo oge ole ka kọmputa na -eji na maka Windows ahụ na -enye anyị ụzọ dị iche iche esi eme ya. Ị nwere ike nwee mmasị ịmụ maka ya maka okwu njikwa pc, ụgwọ ọkụ eletrik ma ọ bụ ọbụlagodi n'ihi na ị chere na pc na -etinye oge dị ukwuu na ị chere na o kwesịrị izu ike karịa. Anyị niile chọrọ ezumike site n'oge ruo n'oge, ọ dị mma?
Kedu ihe kpatara Windows 10 agaghị agbanyụ na otu esi enweta ya?
Echegbula onwe gị maka ihe ọ bụla n'ihi na ihe a niile bụ ihe anyị nwere ike ịma ma ọ bụrụ na anyị mara ụzọ ndị dị iji chọpụta ogologo oge kọmputa dị. N'ihi ozi a niile anyị ga -anakọta na ndekọ ụfọdụ anyị ga -amata ọtụtụ data gbasara ihe niile na -eme na PC. Ọ dị nwute na Windows ọ naghị adị nfe dịka ọ dị na Linux mana n'ime obere oge ị ga -enwe usoro ndị a dị njikere itinye n'ọrụ site ugbu a gaa n'ihu. A gaghị ahapụ gị n'amaghị ogologo oge kọmputa ahụ dị.
1 Kedu ka esi mara ogologo oge kọmputa dị?
1.1 Usoro 1: Jiri njikwa ọrụ
1.2 Usoro 2: Ọnọdụ Ethernet
1.3 Method 3: Jiri CMD na Shell Ike
1.4 Usoro 4: Gbanyụrụ nlele oge
Kedu ka esi mara ogologo oge kọmputa dị?
Anyị na -eji ụzọ dị iche iche aga ebe ahụ iji mara ogologo oge ị nwere kọmputa na:
Usoro 1: Jiri njikwa ọrụ
Nke mbụ n'ime ụzọ ị ga -ama bụ nke ga -eburu gị gaa ebumnuche gị ọsọ ọsọ na mfe. Ka ị ghara iweghara ọtụtụ ụzọ site na oge mbụ. Iji nwee ike ime ya, ị ga -agarịrị nso. Naanị ihe ị ga -abanye bụ onye njikwa ọrụ Windows 10. Iji mepee ya, ị gaghị eme karịa pịa igodo. njikwa + ngbanwe + ụzọ mgbapụ na -ahapụghị ha n'oge ọ bụla. N'oge ahụ windo ga -emepe, ị ga -ahụkwa nhọrọ dị iche iche.
Ugbu a, ị ga -aga taabụ arụmọrụ ma ị ga -ahụ ihe niile doro anya. Ihe ị ga -ahụ bụ ọtụtụ data mana na ala ị nwere ike lelee oge PC na -arụ ọrụ.
Usoro 2: Ọnọdụ Ethernet
Ụzọ ọzọ bụ na site na mgbe ị gbanyere PC, ị ga -ejikọ ya na Ịntanetị. N'ụzọ dị otú a anyị nwere ike jiri usoro a chọọ data njikọ netwọk. Nke a na -arụ ọrụ ekele kaadị netwọkụ gị ka ị nwee ike kelee ya ma ọ bụrụ na iji usoro iji nweta data.
Iji nwee ike ịrụ obere aghụghọ a, ị ga -emerịrị ya gaa na ogwe njikwa wee banye netwọkụ na ịntanetị wee mechaa n'etiti netwọkụ na akụrụngwa ekekọrịta. Ozugbo ị nọ ebe ahụ, ị ​​ga -pịa na netwọkụ anyị nke nwere ike ịbụ ethernet ma ọ bụ Wi Fi, ọ dabere n'ihe ị nwere n'ụlọ. Ugbu a ị ga -ahụ na mpio ahụ ogologo oge njikọ ahụ. Nke ahụ bụ ikwu, site na mgbe mbụ agbanwuru pc ma jikọọ na netwọkụ. Ma ọ bụ ihe bụ otu ihe, ugbu a ị ga -eji usoro a mata ogologo oge kọmputa dị.
Method 3: Jiri CMD na Shell Ike
Ọzọkwa, njikwa Windows na -abata, ya bụ, CMD. Na mgbakwunye na ya, anyị nwekwara ike iji ngwa (nke na -agaghị ada ka ihe ọ bụla nye gị ma bụrụkwa ihe nkịtị) Ozi sistemụ ka anyị nwee ike nweta data nke oge. Naanị ị ga -agba na windo CMD (Ị nwere ike mee ya site na Cortana n'onwe ya) na -enye ya ikike nchịkwa wee mechaa, tinye iwu a kapịrị ọnụ nke anyị ga -ahapụ gị ugbu a, ị ga -enwe ike ịhụ oge ị gbanyere kọmputa gị. Ọ bụghịkwa ihe siri ike ma yie ihe mgbagwoju anya na -ekwu maka Windows console na CMD.
El iwu na ị ga -abanye bụ ihe ndị a:
systeminfo | chọta "oge buut sistemụ"
N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na ịchọrọ iji Power Shell ị ga -emepe console ọzọ na ikikere onye nchịkwa, dịka i mere na nzọụkwụ gara aga, ị ga -abanye iwu na-esote na -agba ọsọ:
(nweta ụbọchị) - (gcim Win32_OperatingSystem) .LastBootUpTime
Ugbu a, ị ga -ahụ ọtụtụ ozi. Ọ na -abụkarị na ihuenyo na -acha anụnụ anụnụ nke mkpụrụedemede ọcha. Ozi niile nwere ike ịpụta n'ụdị dị iche iche mana onweghị ihe na -eme. Ihe ndị a niile ga -enyere anyị aka ịma ogologo oge kọmputa dị na -emechighị ma ọ bụ malitegharịa. Ọ dị nnọọ mfe na ọ bụrụ na i lee ihe ọ na -ekwu n'aka ekpe ị ga -ahụ na ọ na -agụta oge niile n'ọtụtụ nkeji dị iche iche. N'ezie, ọ na -enye gị ozi na ngụkọta nkeji. Ọ ga -amasị gị ịmara ogologo oge kọmputa a na -agbanyụghị na milise sekọnd? N'ebe ahụ ị nwere ya.
Usoro 4: Gbanyụrụ nlele oge
Nke a bụ usoro ọzọ mana ọ daberela na ngwa mpụga nke ị ga -achọ na budata. Gbanyụọ Oge nlele bụ ngwa dị mfe nke ga -enyere gị aka ịma akụkọ ihe mere eme nke ịgbanye ma gbanyụọ kọmputa gị. Anyị ahapụla ya maka njedebe ebe ọ bụ na dịka anyị na -agwa gị na ọ bụ ihe dị na mpụga PC na anyị ekweghị na ọ dị mkpa ịnwe njikwa, kaadị netwọkụ na enyi anyị nnukwu onye njikwa ọrụ yana ozi ya niile.
N'ọnọdụ ọ bụla yana dịka ndụmọdụ, ọ bụrụ na ị na -achọ nke a n'ihi na kọmputa nke gị amalitebeghị ma ọ bụ mechie ya ogologo oge.e anyị na -akwado ka ị mee ya ozugbo enwere ike. Kedu ihe ọzọ, anyị chere na n'oge a ị nwere Windows 10 arụnyere dị ka sistemụ arụmọrụ, ebe ọ bụ na anyị agwaworị gị na ọ bụ ihe bara uru maka sistemụ. N'ezie, ọ na -ewe ọtụtụ n'ime nrụpụta ndị ahụ iji wụnye mmelite sistemụ dị mma (na oge ụfọdụ adịghị mma).
Ndị a bụ mmemme kachasị mma iji tụọ okpomọkụ PC
Na mgbakwunye na nke ikpeazụ ị ga -atọhapụ akụrụngwa PC kpamkpam, belata okpomọkụ ma ị ga -ebugharị akụrụngwa na faịlụ niile ka PC wee rụọ ọrụ nke ọma maka awa ole na ole sochirinụ. Ka ị nụtụbeghị na nrụgharị mgbe ụfọdụ na -edozi ihe niile?
Anyị na -atụ anya na akụkọ a enyerela aka nakwa na n'oge a na post ị jisiri ike mara ogologo oge kọmputa gị nọ na -agbanyụghị ma ọ bụ malitegharịa. Maka ajụjụ ọ bụla ị nwere ike iji igbe nkọwa. Anyị na -anabatakwa aro ọ bụla iji mezi edemede a. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Windows » Etu ị ga -esi mara ogologo oge kọmputa m dị
Otu esi enweta isi okwu na Shein ngwa ngwa
Otu esi ejikọ na sava EA FIFA